Shiinaha wuxuu ku dhex wadaa soo saarida iyo warshad | Huade
Ku wadida gawaarida gawaarida waxay isticmaalaan isticmaalka ugu badan ee jiifka iyo toosan iyadoo la tirtirayo jidadka shaqada ee gawaarida forklift ee u dhexeeya rakibayaasha, forklifts waxay galaan marinnada keydinta ee rakibaadda-baabuurta si loo keydiyo loona soo celiyo santuuqa.
Ku wadida gawaarida gawaarida waxay isticmaalaan isticmaalka ugu badan ee jiifka iyo toosan iyadoo la tirtirayo jidadka shaqada ee gawaarida forklift ee u dhexeeya rakibayaasha, forklifts waxay galaan marinnada keydinta ee rakibaadda-baabuurta si loo keydiyo loona soo celiyo santuuqa. Sidaa darteed marinnada hawlgalka ayaa la baabi'inayaa iyadoo la keydinayo heshiis fara badan oo bannaan. Nidaamkani wuxuu ku habboon yahay dhacdada meesha ka-faa'iideysiga booska ay ka muhiimsan tahay xulashada alaabta la keydiyay, waxay ku habboon tahay in lagu keydiyo tiro badan oo alaabooyin isku mid ah oo paltized ah, si kale haddii loo dhigo, tiro badan oo isku mid ah alaabooyin isku mid ah.
Baakadaha la rakibo ayaa mid mid loo dul dhigayaa laba tareen oo safka ah, taas oo keeneysa isku xigxig go'an oo isdulsaarid iyo soo qaadis ah, asal ahaan waxaa jira laba nooc oo noocaas oo kale ah, ku dhex wad oo ku dhex mara.
Gawaarida ku wad
Forklift wuxuu ku kaxeyn karaa kaliya hal dhinac oo ka mid ah haadka qafiska, sariirta ugu dambeysa ee ku jirta waa santuuqa ugu horeysa. Nooca noocan oo kale ah waa fikrad ah in lagu keydiyo walxaha wareega yar.
Ku dhex mari shaashadda
Forklift-ka ayaa ku dhex wadi kara labada dhinac ee haadka qafiska ah (hore iyo gadaal), santuuqa ugu horeeya ee gudaha ku jira ayaa ah santuuqa ugu horeeya ee soo baxa. Nooca noocan oo kale ah ayaa si fiican loogu dabaqaa kaydinta wareegga sare.
Sababtoo ah gawaarida forklift ee haadka hagida, shilalka lidka ku ah waa in lagu tixgeliyaa qaabeynta xalka, badiyaa biraha dhulka waxaa lagu daraa ilaalinta xaquuqda iyo hagidda gawaarida forklift, astaamaha waxaa lagu rinjiyeeyay muuqaal sare, iyo santuuqyo midab dhalaalaya leh waxaa lagula talinayaa inay ka caawiyaan hawlwadeennada inay si dhakhso leh oo sax ah u soo ururiyaan suufiyada
Kordhi ka faa'iideysiga booska sagxadda
Ka tirtir wadooyinka hawlgalka ee aan loo baahnayn
Si fudud loo ballaadhin karo dabacsanaanta ugu badan
Kufiican tiro badan oo alaabooyin kaladuwan leh
FIFO / LIFO xulasho, ku habboon bakhaarka xilliyeed
Kaydinta nabdoon oo habsami leh alaabada cadaadiska u nugul
Had iyo jeer loo isticmaalo kaydinta qabow sababtoo ah ka faa'iideysiga ka faa'iideysiga booska ee heerkulka xakamaynta
Hore: Rakibida Kartoonka
Sariirta socodka sariirtaada
Riix Rack Back